Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » FAA hampihatra ny South-Central Florida Metroplex amin'ny 22 aprily
Ny fomba fanao amin'ny Metroplex dia hamela sidina izay mivantana kokoa ary misy mombamomba ny fiakarana sy fidinana mahomby kokoa
South-Central Florida dia iray amin'ireo hetsika 11 Metroplex manerana ny firenena
Ny fomba fiasa dia mitaky fiofanana fanampiny ho an'ny mpanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra sy ny fanavaozana ny mandeha ho azy ao amin'ny toerana fanaraha-maso ny fifamoivoizana
Ny tetikasa feno dia hanatsara ny fahombiazan'ny habakabaka any amin'ny faritra atsimo-afovoany Florida Metroplex
The Fitondrana federaly federaly (FAA) amin'ny 22 aprily dia hampihatra ny dingana voalohany an'ny South-Central Florida Metroplex, ny fikasan'ny masoivoho hifindra sidina am-pilaminana sy am-pahombiazana hatrany amin'ny antsasaky ny fanjakana atsimo. Ny fomba fanao amin'ny Metroplex dia hamela sidina izay mivantana kokoa ary misy mombamomba ny fiakarana sy fidinana mahomby kokoa.
Hamoaka fomba vaovao 54 ny masoivoho amin'ny 22 aprily amin'ny XNUMX aprily. Ny fomba fitopolo ambin'ny folo amin'ireo fomba fiasa ireo dia mila fampiofanana fanampiny ho an'ireo mpanara-maso ny fifamoivoizana an-habakabaka sy ny fanavaozana ny automatisation amin'ny toerana fanaraha-maso ny fifamoivoizana an-habakabaka alohan'ny hampiharana azy ireo. Manantena izahay fa hitranga izany amin'ny tapaky ny volana aogositra. Na dia havoaka ho fonosana aza ireo fomba fanao ireo, dia tsy natao hampiasaina miaraka izany. Ho azon'ireo mpanamory fiaramanidina sy mpanara-maso ny fifamoivoizana izy ireo arakaraka ny toetr'andro sy ny fepetra takian'ny asa. Indraindray ny mpanara-maso ny fifamoivoizana dia mety mivezivezy amin'ny sori-dàlana navoakan'ny fiaramanidina, ho fiarovana, fahombiazana na hamerenana azy ireo manodidina ny rafitry ny toetr'andro.
Ny tetikasa feno dia hanatsara ny fahombiazan'ny habakabaka any amin'ny faritra atsimo-afovoany Florida Metroplex amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fomba fahatongavana sy ny fiaingan'ny sidina mankany sy amin'ny seranam-piaramanidina. Ny zotra vaovao dia misy fiovana sasantsasany amin'ny làlan'ny sidina fiaramanidina sy ny haavon'ny toerana sasany, fa tsy hiteraka korontana na hampitombo ny isan'ny fiasan'ny fiaramanidina any amin'ireo seranam-piaramanidina. Ny masoivoho dia namolavola ireo fomba vaovao hanarahana ny làlan'ny sidina misy raha azo atao.
Ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina dia ampahany lehibe tamin'ny fizotran'ny tontolo iainana Metroplex. Ny FAA dia nanao fanentanana betsaka ho an'ny daholobe alohan'ny namoahany ny fanapaha-kevitra farany momba ilay tetikasa. Ilay masoivoho dia nanatontosa atrikasa ho an'ny daholobe 29 sy vanim-potoana fanehoan-kevitra roa ampahibemaso 120 andro tamin'ny 2019 sy 2020. Ilay masoivoho koa dia nanombatombana sy namaly ireo fanehoan-kevitra 3,239 tamin'ny Final EA.
Ny FAA dia namoaka ny Finding no Significant Impact-Record of Decision (FONSI-ROD) ho an'ny tetikasa South-Central Florida Metroplex tamin'ny Oktobra 2020.
South-Central Florida dia iray amin'ireo fandraisana andraikitra 11 Metroplex manerana ny firenena, ary izy no tetikasa farany hampiharina. Ny FAA dia hampihatra ny dingana faharoa sy farany amin'ny tetikasa amin'ny volana aogositra 2021.